IS DIIWAAN GELIN 2022-2023 HADA FURAN! Marna Waa Aad
Hore Si Aad U Qiyaasto! Wax dheeri ah aqriso IS DIIWAAN GELIN 2022-2023 HADA FURAN! Marna Waa Aad
Hore Si Aad U Qiyaasto! Wax dheeri ah aqriso CEC4me!: La kulan Carsyn! Baro Sida CEC u ahaa
Kulliyadaha Hore ee Colorado Fort Collins MS (CECFCMS) ayaa albaabada u furay 2015 sidii waxbarasho bilaasha ah, dugsi dhexe oo furan diiwaangelinta charter, soo dhawaynta dhammaan ardayda aagga Fort Collins oo bixisa diiwaangelinta waqti-buuxa ah iyo diiwaangelinta-dhiman ah ee dugsiga guriga iyo qoysaska aan dawliga ahayn. Dugsi xanaanayn yar ahaan, CECFCMS waxay bixisaa jawi shakhsi iyo taageero halkaas oo ardaydu ay awoodaan inay sahamiyaan oo ay raacaan jidadkooda waxbarasho iyo shaqo ee gaarka ah. Waxa aanu qiimaynaa arday kasta oo isu diwaangaliya si aanu ula kulano halka uu ka joogo aqoon ahaan, heerkuu doono ha ahaadee - waxaanan siinaa fursad ay ku bilaabaan ka shaqaynta koorsooyinka heerka kuleejka isla marka ay diyaar u yihiin kuleejka. Wadaagista goobtayada kambaska ee Dugsiga Sare ee CEC Fort Collins waxay noo ogolaanaysaa inaanu ardaydeena siino dariiqa u gaarka ah fasalka 6aad-12aad ee ku wajahan shahaadooyinka kuleejka iyo shahaadooyinka shaqada - dhamaantood waxay ku kacayaan $0 qoyskeena.
Jeb Holt – Maamule
Kulanka Guddiga Maamulka CEC ee gaarka ah waa Arbacada, Juun 15, 2022, @ 7:30 subaxnimo waxaana lagu qaban doonaa si toos ah iyada oo loo marayo...
Hoggaaminta, oggolaanshaha, la-talinta, iyo kooxaha tacliinta ee CECFCMS waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo igmaday si aan u gaarsiinno saameyn togan oo nolosha oo dhan ah ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo nolosha labadaba. Xubin kastaa wuu fahmayaa oo wuxuu la qaybsanayaa fulinta Bayaanka Hawlgalka CEC isagoo isticmaalaya kheyraad kasta oo suurtogal ah iyo inuu dhiso bulsho adag oo kambaska oo ay ka buuxdo xamaasad oo ay hogaaminayso heer sare.
Jeb Holt – Maamule – View Profile
TJ King - Iskuduwaha Tignoolajiyada Goobta - View Profile
Angela Cable - Soo dhawaynta View Profile
Karen Karppinen - Iskuduwaha GT & Macallinka Xisaabta - View Profile
Jackie Duran - Xirfad-yaqaan - View Profile
Steve Gravelle - Macallinka Sayniska - View Profile
Jack Moffett - Macallinka Xisaabta - View Profile
Ashtyn Rossman - Orchestra iyo Band - View Profile